ကမ်ဘာတဈဝှမျး အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီး သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျး နှိုငျးယှဉျခကျြ။ – SoShwe
Home/Other/ကမ်ဘာတဈဝှမျး အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီး သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျး နှိုငျးယှဉျခကျြ။
admin November 22, 2021	Other Leaveacomment
ကမ်ဘာပျေါရှိ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာ အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ စိတျဖိစီးမှု၊ စိတျဓာတျ ကဆြငျးမှုတှေ ပိုမိုခံစားရပွီး မိမိကိုယျကို အဆုံးစီရငျဖို့အတှကျလညျး ပိုမိုကွိုးစားလာကွပါတယျ။ ဒါဆို ဘာ့ကွောငျ့ အမြိုးသားတှအေဆုံးစီရငျမှုနှုနျးက အမြိုးသမီးအရအေတှကျထကျ ပိုမြားနရေတာလဲ ? ? ?
WHO ရဲ့ ထုတျပွနျကွငွောခကျြအရ ၂၀၁၆ ခုနှဈအတှငျး တဈကမ်ဘာလုံး အဆုံးစီရငျမှုနှုနျးဟာ ခနျ့မှနျးခွေ ၇၉၃၀၀၀ ယောကျခနျ့ရှိပွီး အမြားဆုံးမှာ အမြိုးသားတှဖွေဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ၁၉၈၁ ခုနှဈမှာတော့ အင်ျဂလနျနိုငျငံဟာ မိမိကိုယျကို အဆုံးစီရငျမှုနှုနျး အနညျးဆုံးဖွဈပွီး အဓိကကြူးလှနျသူတှကေတော့ အသကျ ၄၅ နှဈအောကျ အမြိုးသားတှပေဲ ဖွဈကွပါတယျ။ အမြိုးသမီး သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျးကတော့ အမြိုးသားတှရေဲ့ သုံးပုံတဈပုံမြှသာ ရှိပါတယျ။ အခွားနိုငျငံတှကေို လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ သွစတွေးလနြိုငျငံမှာလညျး အင်ျဂလနျနဲ့ အဆုံးစီရငျမှုနှုနျး တူညီပွီး အမရေိကနျနိုငျငံမှာတော့ အမြိုးသားရာခိုငျနှုနျးက အမြိုးသမီးရာခိုငျနှုနျးထကျ ၃.၅ ဆ ကြျောပိုမြားကာ ရုရှားနဲ့ အာဂငျြတီးနားမှာတော့ ၄ ဆ ပိုမြားပါတယျ။
အမရေိကနျ သကွေောငျးကွံစညျမှု ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေး Foundation ရဲ့ ဒုဥက်ကဌဖွဈသူ Jill Harkavy Friedman မှ “ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ Data တှကေို ပိုမိုလလေ့ာလလေေ၊ အခုလို သကွေောငျးကွံစညျတဲ့နှုနျး ကှာလာတာကို ထငျထငျရှားရှား တှရှေိ့လာလပေဲဖွဈပါတယျ။ ကမာတဈဝှမျး အမြိုးသား သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျးဟာ အမြိုးသမီး သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျးထကျ ပိုမိုမြားပွားတယျဆိုတာကို ငွငျးစရာအကွောငျး မရှိပါဘူး . . . ” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အကွီးအကယျြ စိတျထိခိုကျခံစားမှုတှေ၊ ရှုပျတှေးတဲ့ ကိစ်စရပျတှဟော လူတှကေို သကွေောငျးကွံစညျဖို့အတှကျ ဖိအားဖွဈစပွေီိး တိကသြခြောတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှမေရှိဘဲ ကြူးလှနျခဲ့ကွခွငျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ စိတျထိခိုကျခံစားလှယျခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုတှနေဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးမှုတှကေို အမြားဆုံး ထိခိုကျခံစားနရေတာတောငျမှ အမြိုးသား သကွေောငျးကွံစညျမှုနှုနျးဟာ အမြိုးသမီးတှထေကျ ပိုမြားနရေတဲ့အကွောငျးကို ရှာဖှနေိုငျခွငျး မရှိသေးပါဘူး။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းမှုတွေ ပိုမိုခံစားရပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်လည်း ပိုမိုကြိုးစားလာကြပါတယ်။ ဒါဆို ဘာ့ကြောင့် အမျိုးသားတွေအဆုံးစီရင်မှုနှုန်းက အမျိုးသမီးအရေအတွက်ထက် ပိုများနေရတာလဲ ? ? ?
WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး အဆုံးစီရင်မှုနှုန်းဟာ ခန့်မှန်းခြေ ၇၉၃၀၀၀ ယောက်ခန့်ရှိပြီး အများဆုံးမှာ အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုနှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အဓိကကျူးလွန်သူတွေကတော့ အသက် ၄၅ နှစ်အောက် အမျိုးသားတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်းကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာ ရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်း အင်္ဂလန်နဲ့ အဆုံးစီရင်မှုနှုန်း တူညီပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ အမျိုးသားရာခိုင်နှုန်းက အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းထက် ၃.၅ ဆ ကျော်ပိုများကာ ရုရှားနဲ့ အာဂျင်တီးနားမှာတော့ ၄ ဆ ပိုများပါတယ်။
အမေရိကန် သေကြောင်းကြံစည်မှု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Foundation ရဲ့ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ Jill Harkavy Friedman မှ “ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Data တွေကို ပိုမိုလေ့လာလေလေ၊ အခုလို သေကြောင်းကြံစည်တဲ့နှုန်း ကွာလာတာကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရှိလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမာတစ်ဝှမ်း အမျိုးသား သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်းဟာ အမျိုးသမီး သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်းထက် ပိုမိုများပြားတယ်ဆိုတာကို ငြင်းစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အကြီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှုတွေ၊ ရှုပ်တွေးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေဟာ လူတွေကို သေကြောင်းကြံစည်ဖို့အတွက် ဖိအားဖြစ်စေပြီိး တိကျသေချာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘဲ ကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် စိတ်ထိခိုက်ခံစားလွယ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေကို အများဆုံး ထိခိုက်ခံစားနေရတာတောင်မှ အမျိုးသား သေကြောင်းကြံစည်မှုနှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုများနေရတဲ့အကြောင်းကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
Previous ဂပြနျလူမြိုးတို့ရဲ့ ထူးထူးခွားခွား အမြိုးသားလိငျအင်ျဂါပှဲတျော။
Next လိငျတူခငျြး လကျထပျထိမျးမွားတာကို တရားဝငျအတညျပွုခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး အာရှနိုငျငံ။